Somalia:-Shirkadda SOMTEL Oo Daah-furtay Saamiyadeedda Iyo Adeegyo Casri ah
(Hadhwanaagnews) Tuesday, November 06, 2018 20:48:04
Hargaysa(HWN):-Waxaa Axddii, 4 November, si rasmi ah looga daahfuray magaalada Muqdisho qaybtii KOWAAD
Hargaysa(HWN):-Waxaa Axddii, 4 November, si rasmi ah looga daahfuray magaalada Muqdisho qaybtii KOWAAD ee saamiyada shirkadda isgaarsiinta ee SOMTEL, iyo ballaarinta adeegyada kale ee SOMTEl sida Internetka oo 3G iyo 4Gba leh iyo eDahab.
Waa markii u horreysey ee saamiyada shirkadda Somtel loo bandhigo ganacsatada iyo dadweynaha. Saamiyada maanta la daahfuray, waxa ay bar-bilow iyo astaanba u yihiin horumarinta adeegyada macmiilka ee ay horeba ugu caan baxday SOMTEL iyo shirkadaha kale ee Dahabshiil Group.
Waxa adeegyada Internetka oo xawaare sare
leh uu gaari doonaa markii u horreysey goobo badan oo aan hore u heli jirin.
Sidoo kale, waxa ay heli doonaan adeegyada eDahab oo u fududayn doona fursado badan oo ku-adeegasho iyo maalgelinba leh.
Adeegyada casriga ee maanta la daahfuray waxa ay, guud ahaanba, macaamiisha iyo bulshadaba ka kaabi doonaan kobcinta dhaqaalaha ku kala socda moobillada iyo Internetka ee ‘eCommerce’.
Guddoomiyaha iyo Aasaasaha shirkadaha Dahabshiil, Maxamed Siciid Ducaale, oo xafladda daahfurka ka soo qayb galay, ayaa waxa uu yidhi: “Adeegyadan casriga ah ee maanta aynu daahfuraynaa waxa ay fursad halbowle ah siin doonaan macamiisha deegaankan ku dhaqan iyo kuwa ka baxsan ee aan fursaddan hore u helinba, iyada oo tiknoolajiyadda casriga ah ee xaawaraha sare ee Fibre Optic lagu soo kordhin doono dhowaan.
Sidoo kale, adeegyada eDahab iyo Baanka, oo lagu hagayo dhammaan shurucda maaliyadeed iyo maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba, waxa ay macmiilka u soo dhowayn doonaan adeegyo maalgelineed iyo fursado shaqo oo aan looga maarmi-karin hawl-maalmeedka shakhsiyadeed iyo kan ganacsiba”.
Waxa daahfurka maanta ka soo qayb galay Raiisal Wasaare Ku xigeenka dawladda Federaalka Somalia, Mahdi Guuleed Khadar, wasiirro, mudanayaal labada Gole ee baarlamaanka, ganacsato waaweyn, hay’adaha caalmiga ah iyo kuwa maxalliga ah, ururrada bulshada, oo ay ka mid yihiin kuwa dhaqanka, diinta iyo haweanka, iyo marti-sharaf kale oo aad u soo camiray madasha.
Dhammaanba madaxdii iyo marti-sharaftii halkaa ka hadashay waxa ay ka marag-fureen in adeegyada Shirkadaha Dahabshiil ku soo biiriyeen jawiga ganacsi fursado u sahlaya macmiilka inuu helo kala-doorasho adeeg iyo qiimo oo u dan ah, isla markaana koboca dhaqaale ee gobolka door libaax ka qaadan doonaan, iyada oo teknoolajiyaddii u dambeysay ee caalamka (State of art technology) la adeegsanayo, sida Fibre Optic’ga, oo mandaqadda Bariga iyo Geeska Afrikaba u ah fursad dahabi ah.